Yolanthe Cabau na usoro ndị uwe ojii, DNA, mmepụta John de Mol mara mma (dịka ozi ANP): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 28 August 2019	• 3 Comments
isi iyi: televizier.nl
Ajuju a na enye m nsogbu n’obi oge ụfọdụ: John de Mol bụ scammer kachasị na Netherlands? John de Mol bụ onye nwe ANP, General Dutch Press Office na nke Talpa Network, yabụ ịmalite ịmalite ịtụgharị ma ọ nweghị ike iji otu ihe ahụ mepụta akụkọ adịgboroja dịka ọ na-eji maka usoro ndị uwe ojii dịka DNA meputa. Yolanthe Cabau nwere ike rụọ ọrụ dị egwu n'usoro ndị uwe ojii ohuru a nke yiri ka ọ na-emezu ebumnuche mgbasa ozi niile achọrọ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, m na-ede ederede na ejiri DNA dị ka okwu anwansi iji mepụta echiche na ị nwere ike iji ya dozie okwu igbu mmadụ, mana na agbasa echiche a na nzuzo iji nwee ike ịhazi ọdụ data mba nke mere na n'oge dị nso (n'etiti ndị ọzọ) njigide mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ọnụọgụgụ mmadụ ga-ekwe omume site na netwọ 5G (lee ebe a). Ọ bụ ya mere a ga-eji bulite mgbasa maka gburugburu 'DNA dị ka ihe anwansi' gaa oke dị elu dị otú ahụ. Usoro nke ndị uwe ojii na-enye echiche na ị nwere ike idozi ikpe igbu mmadụ na DNA bụ ihe agbasasị dịka, dịka ọmụmaatụ, ikpe Jos Brech, na mberede mgbe afọ 20 nke DNA DNA hụrụ na Nicky Verstappen dị n'okpuru. Ekwesịrị itinye okwu ahụ DNA n'ime uche gị nwere ọgụgụ isi yana gịnị ga - akacha mma karịa iji ihe mmuke dịka Yolanthe maka nke ahụ? Ingchọta DNA anaghị egosi na ọ nweghị ihe ọ bụla ma ozugbo DNA gị nọ na nchekwa data, ikpe ziri ezi nwere ike itinye DNA na mpaghara mpụ iji mee ka ị maa gị ikpe. Enwere ike i coomi DNA gị na ụlọ nyocha (lee ebe a).
Ajụjụ ọzọ m na-ajụ onwe m mgbe ụfọdụ bụ: John de Mol gaara enweta ijeri ijeri na mmepụta TV naanị ma ọ bụ ezinụlọ de Mol rụrụ ọrụ mbu na akụkọ akụkọ adịgboroja ruo ọtụtụ afọ? E kwuwerị, ha nwere ụzọ niile enwere ike iji rụọ ọrụ ha, yabụ o yighị ka ọ gaghị ekwe omume ịnagide nwatakịrị Heineken Peter R. de Vries N'ibute ọrụ dị ka "onye na-eme mkpesa mpụ" yana ndị enyi Cor van Hout, Willem Holleeder, Frans Meijer na Jan Boellaard na ndị na-eme ihe nkiri.
isi mmalite: eenvandaag.avrotros.nl
Ikwenyere na ikpe ikpe Willem Holleeder na nwanne ya nwanyị Astrid dị ka onye na-eme ihe nkiri ọhụụ na mbara ihu ahụ gbagburu n'ihi oke ogbugbu ndị ahụ e mere? Ghara ime ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ncha ga-emegharị gị anya. Holleeder emebeghị onyinye dị mkpa na nnukwu usoro ihe ngosi nke a na-ejikarị okwu 'akara akaebe'? Know mara ihe nke ahụ pụtara? Okwu ahụ na-ekwu ya niile .. Okpu eze (ikpe nnochite anya okpueze) nwere ike onwe ya ga-agbakwa àmà. A na-anabata onye akaebe ahụ ọbụlagodi amaghị aha.
Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ezinụlọ de Mol nwetala ego ha nwetara site na akụkọ akụkọ ụtụ na-akwụ ụgwọ site na ụtụ ụtụ na Peter R. de Vries bụ onye na-ahụ maka mmụọ (PsyOp) nke nwere ike ịhịa aka na ya na ndị mmadụ. Ọ gaghịkwa eju m anya na ọtụtụ ihe buru ibu na mgbasa ozi bụ naanị akụkọ akụkọ adịgboroja. N'ikpeazụ, ụzọ niile dị na Studio nke John de Mol (nke ahụ ruo ọtụtụ afọ).
It juru gị anya ma m kwuo na ekwetaghị m na mgbada Freddy Heineken na onye ọkwọ ụgbọ ala Ab Doderer? Nke ahụ etinyebeghị akara Heineken na maapụ n'ụwa niile? O nwere ike ịbụ enweghị ahịa dị mma karịa. Ọnọdụ a na-akpọ Amsterdam Mafia niile adịbeghị n'echiche m. Ha nwere ike ịbụ naanị akụkọ gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị nọ na gburugburu 'Nsogbu, Ngwọta, Ngwọta". Always ga-achọkarị ndị isi okwu ole na ole ka ị nwee ike itinyekwu ọnọdụ ndị uwe ojii. Ihe ọ bụla anyị maara banyere ya sitere na mgbasa ozi. Know mara, site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dị ka nke ahụ sitere n'aka John de Mol. N’ezie kwa enwere akwukwo banyere ede ede na ihe nkiri ma obu ihe ngosi ihe nkiri emere banyere ya. Ka ọ bụ na ha bụ ndị na - eme TV mgbe niile ma ọ bụrụ na ha na - eme ihe nkiri mgbe niile?
Dị ka ọmụmaatụ, usoro Holleeder gosipụtara otu ikpe si arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na otu obere ihe (ma ọ bụ na-enweghị) ihe achọrọ maka mkpesa. Ntinye na akara aka nke nkwenye siri ike dabere na ndị akaebe gbara okpueze na aghụghọ nke ezinụlọ (na-enweghị ezigbo ihe akaebe siri ike) mepụtara ụlọ maka usoro ikpe ziri ezi iji mee ka mmadụ niile nọ n'azụ ndụ. Ikpe ziri ezi kwesịrị ịnwe onye akaebe na-amaghị ama ma ọ bụ ikpe ziri ezi ga-ekwere akụkọ nwanne nwanyị na nkwenye zuru ezu. Ya mere Willem Holleeder na Peter R. de Vries ekerewo oke ọrụ na mmezu nke iwu ọhụụ na nke ikpe. Usoro Holleeder a bụ usoro dị otú ahụ a na-efeghari ogologo oge nke gbasaa kemgbe ọtụtụ afọ? Nke a ga - eme ya eme ma ọ na - ahụkwa ọfụma na anyị abịalarị n'onyinyo nke 'ụmụ nwoke dị arọ'. Gini ka Joseph Goebbels kwuru ọzọ? "Ọ bụrụ na ịgha ụgha ma kwughachi ya oge zuru ezu, onye ọ bụla ga-ekwere na ya".
isi mmalite: denignederactueel.nl
Ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ekweere m ihe ọ bụla gbasara mwakpo nke onye na-ese ihe nkiri Rob Scholte, onye (dịka isi iyi na-amaghị ama) ruru eru maka mgbapụ ụkwụ n'ihi ọrịa obere oge tupu ọgụ ahụ. Could nwere ike iji oge a mee ihe iji busoo ọgụ? Kedụ ka ụgbọ ala ụgbọ ala gbawara ma nwee ike gbajie ụkwụ Scholte mgbe "enyi ya nwanyị" Micky Hoogendijk (onye nọ ọdụ n'oche onye ọkwọ ụgbọala) gbapụrụ na enweghị mmachi (mana ime ọpụpụ)?
Ọ bụrụ na i kwe ka ọ daba na mmiri, ọ na - eyi mgbe ụfọdụ ka ọ bụ akụkọ na - enweghị atụ. Ha mere, na-amasị echiche anyị, n'ihi na onye na - akọ akụkọ NOS dị njọ na - agwa ya na uwe dị mma yana n'ihi na ị na - ahụ ihe oyiyi Mana ee, John de Mol nwere igwefoto zuru ezu, ndị mmadụ na akụnụba iji tinye ihe ọnụ.
isi mmalite: Cutndays.nl
Peter R. de Vries n'ezie nwere onye na-eduga mgbe niile ma a bịa n'okwu ikpe igbu ọchụ. Ọ bụ nwoke ahụ doziri okwu igbu ọchụ nke Marianne Vaatstra na DNA anwansi. Ọ bụ nwoke ahụ gbara ndị Nicky Verstappen ikpe na ya (ya na anwansi DNA). Ọ bụ ya bụ nwoke n'ezie n’azụ usoro ikpe niile ahụ (PsyOp?): Site na Anne Faber ruo na okwu ikpe Romy na Savannah na ihe niile (DNA) anyị nwere ike iso na mgbasa ozi. Akpọrọ m ya ihe ngosipụta, n'ihi na mgbe niile, ọtụtụ ozi ọma sitere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ndị ijeri ego anyị na onye na-ahụ maka TV bụ John de Mol. Kedu onye na - agwa anyị obi ike 100% na anyị nwere ike ịtụkwasị akụkọ ndị a niile? Onye na-agwa anyị na anyị ahụbeghị anya akụkọ ụgha kemgbe? Ewoo, chere! Ndị mgbasa ozi ga-agwa gị. Matthijs van Nieuwkerk, Eva Jinek, Jeroen Pauw na ọtụtụ ndị ọzọ kwuru echiche. E kwuwerị, ha na-ekwupụta uche gị. "Tụkwasara anyị obi na akụkọ ụgha niile sitere na Russia"
Ahụrụ m ka Willem Holleeder ji ọ enjoyingụ na-a enjoyingụ mmanya na Cor van Hout, Willem Endstra na Theo van Gogh n'àgwàetiti Waikiki. Anyị chere na anyị ma ihe na-eme n'ụwa, n'ihi na akwụkwọ akụkọ anyị, redio na TV na-elecha ụwa ụwa anya kpamkpam. Ndị na - ahụ maka mgbasa ozi steeti na - echekwa mkparịta ụka nke ndị na - elekọta mmadụ, nke kwesịrị iduzi mkparịta ụka ahụ n'ụzọ chọrọ. Enwere ike melite profaịlụ adịgboroja (gụnyere netwọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị mfe) maka nke a. O nweghị ihe anyị ma. Anyị chere na anyị ma, mana otu obere ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta na-acha uhie uhie acha uhie uhie. Ihe nkiri 'Wet nkịta'bụ egwuregwu ụmụaka na-atụnyere ihe anyị na-ahụ kwa ụbọchị.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: parool.nl, imdb.com, mgbide.ineken.nl
Nzaghachi si n'aka John de Mols 'ANP nwebisi ike nke ndi dinta PermissionMachine.com
Anọ ANN, John De Mol, ikike ikike ikikere 2: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
Maas n'ime iwu megide nkwupụta nke ANP na John de Mol na 'ikike ndị odeakwụkwọ' ya bụ Machine.com
Ihe e kere eke 'Fuck John de Mol's Permission Machine Foundation'
Tags: ANP, DNA, agba, Freddy Heineken, john de mol, ozi ọma, Nicky Hoogendijk, ụlọ ọrụ pịa, Peter R. de Vries, Rob Scholte, Willem Holleeder, Yolanthe Cabau
28 August 2019 na 15: 23
Nna ukwu ibe ọzọ! Daalụ!
N’ezie nka bu otua…. Amaghim na de Mol aburula onye nwe ANP.
N'uche nyocha nke nyocha nke Noses, amaara m mgbe ọtụtụ ọfụma na nke a bụ klọb dị n'azụ ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, Heineken bụ onye ọghọm aghụghọ nke nna nna Petersen, n'akụkụ nne ya Carla Breitenstein, onye na-ajụ ajụjụ.
Ọ dị mma ị nwere ike iche, yabụ kedu, yịkị, nzuzu. Ọ bụghị maka m na m na - ejikọkarị mmekọrịta ndị a mgbe ọ bụla n'ọchịchịrị, ihe jọgburu onwe ya na - enweghị ike ịnabata ìhè ahụ, na ọ ga - enwerịrị, nyocha a.
Heineken nọkwa n’akwụkwọ ojii nke Epstein… ya mere ọ bịakwara agwaetiti ahụ ..
Onye uwe ojii Klaas Wilting bụ n'ezie onye na-ajụ imi. Ikwesiri, n'ihi na ị tụkwasịghị onye ọ bụla obi n'ụdị ụgha ndị a, belụsọ klọb ịgba agba agba ama mara ụwa.
Holleeder bụ onye amaara imi ya.
Talpa nwere akara nke osisi Kabbalah; akwụkwọ amoosu talmudic juputara na aghụghọ nke na-anabata klọb a n'ụzọ zuru ezu. Can nwere ike ịkpọ ha "Luciferians," "Cabal," ma ọ bụ ndị Sabbateans.
A na m akpọ ha "njikwa ụgha." You nọ ebe a na-aga n’ihu na-amalite na-akpachapụ anya na-agbachi ọgbụgba nke Semitism, nke ha na-etinye n'ọrụ na mberede.
Nna m ochie de Mol nwekwara imi. Mana Linda na John, dịka Bil Gates nwere ike 'emelite' ya; ọ ga-apụ obere.
Omume nke klọb a jọgburu onwe ya na enweghị ike ileghara ya anya.
N'ime nyocha m, ahụrụ m aha ndị a:
Epstein bu oke bekee nke Askhenazies.
Trotzky, Lenin, Stalin, Marx, Yeltsin, Putin, Bush, Clinton-Rodham, Obama (nne), Trump (jaja), Melanie, Netanyahu, Antony Weiner, Weinstein, Durtoux-case, Mossad, Issis, Cia, Mike Pompeo, Rothschilds, Hitler, Pope Francis, Zorreguieta, Windsors, Churchill, Beatrix na '' Alfred Henry (Freddy) Heineken ', nne ya bụ Ajụjụ. mekwaa, Carla Breinstein, Soros
Einstein, Darwin, Steven Spielberg, Bill Gates, Glenn Close, Kissinger, Bido, Murdock, Dick Cheney, JP Morgan, Mussolini, Buzz Aldrin (Nasa adịgboroja na-adịghị mma nke Nasa).
Trudeau, Aldous Huxley, Charles na Jared Kushner, Jacky Kennedy, Appelbaum fam. (Onye dere akụkọ Bolshevik ụgha mgbe ọ gbusịrị Solshenytsyn), Darwin, Queen Elizabeth, Al Gore,
Maxwell (Robert nke 'enyo'), na Gishlaine), Zimbardo (nnwale nnwere onwe ụgha), Fam. Kravis, ndị nwere Macron na Bilderberg, 5G pusher (FDA) Brad Gillen, Richard Branson, Boris Johnson, May, Thatcher, Sarkozy, Rockefellers, Julie Gerberding (CEO Merck), Robert Gallo onye kere nke Aids,
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Netherlands; Cohen, Asscher, Kok, Klaver, van Agt, Timmermans, Deijsselbloem, Schippers, Demmink, Hiddema, Peter R. de Vries, Juan Guaido (Venezuela) Jair Bolsonaro (Brasil), Zorreguieta (nna M.), Victoria Nuland (Kagan ezinaụlọ, bibie Ukraine), Timmermans, Juncker (EU) Nixon, Rockefeller, ndị Bolsheviks ... wdg.
Na nkenke, zuru ezu ichegbu onwe gị. O siri ezigbo ike ikwado ihe niile; emechaa. Mana ha bụ ndi isi na nka.
N'ime Talpa ị hụrụ Gordon, Albert Verlinde, CEO Peter de Mönnink, Jan Versteeghe wdg na nke ikpeazụ mana ọ bụghị nke kachasị Lil Kleine, onye kpọrọ nwa ya nwanyị 'Zion'.
Nchọpụta dị iche bụ na Cor van Hout na Theo van Gogh ha abụọ nwere otu isi. Ma n'ezie Theo nwere 'imi' ọzọ. Rob Scholten nwekwara. Aghọtara m nke ọma na enwere otu “mmụọ” n'azụ ngụkọta ụwa ugbu a.
Umu oke ohia oku. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Nke a gha abata n’ìhè.
28 August 2019 na 17: 08
Daalụ Vrijland, mana echeghị na ọ bụ ihe na-akpata ọkpọ, mmadụ niile hụrụ n'ebe dị anya
mwakpo nke Rob Scholte nwere ume nke ikuku dị ọhụụ, mana ndị steeti gharịtara goro ụfọdụ ihe nkiri. Starring Mazi Scholte ji aka ya na ya mee ya, ime ya na ike ma na-akpọ nkịta a bitụ n'èzí n'ihi otu ike (gọọmentị), olee ụdị agbụrụ ahụ?
Ajụjụ ọnụ nke Mr Scholte gosipụtara na weebụsaịtị nke ya site na Ogwe adabaghị ya mma, ọ nweghị ihe ọ bụla metụtara ọdịmma ọha na eze .... mana ndị omekome ahụ na-agagharị naanị ....
N'ezie, ọ bụghị onye ọ bụla ka a na-ekwe ka ọ na-ese na Royal House dị ka nke ahụ, ọ bụ oyiri.
Kedu maka ọrụ Micky Hoogendijk? ọ na - eji foto na - emegharị transgender burukwa, iberibe ihe egwuregwu na - adabakọ nke ọma n'ụzọ dị otu a.
Lọ mgbasa ozi na-ejide n'aka na anaghị asọpụrụ ezigbo ndị dị ka Martin Vrijland na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ TV, De Mol ka bụ Mol, lee ụdị! ? Verkpa aghara
30 August 2019 na 12: 15
Nke ahụ bụ ole na ole n'ime nkwupụta ndị a na-enyo enyo.
1 mkpesa Heineken bụ nwantakịrị adịgboroja ma nọrọkwa ya, yabụ emeghị
2: Rob Scholte enwebeghị bọmbụ (bombu aka) n'okpuru oche ya, Iro!
na: 3 n’ezie ihe nlere DNA TV nke DNA megide ndị mmadụ na-eji… Starlet
Onweghi onye na-enye mmeghachi omume, ọbụnadịghị na ndị otu Heineken na Rob Scholte? mgbe ahụ ị ga-eche na ọ gaghịzi abụ enyo.
" Gini bu eziokwu banyere mwakpo nke onwu n'ihi nwayi nke puru ime na Assen?
LỌỌR:: ọgwụ ọgwụ na-agbanwe agbanwe bụ eziokwu! Nwoke dị afọ 80 loro mgbe mbụ ulere anụmanụ »
Nleta ha: 4.148.422